माधव कमरेड, ओलीका समर्थक सबै ‘दास’ नै हुन ? - Ganatantra Online
काठमाडौ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले निलम्वित बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चैत २७ मा बिराटनगरमा भन्नुभयो– केपी शर्मा ओलीलाइ सहयोग गर्नेहरु दास हुन् । त्यसकारण समानान्तर कमिटी गठनका लागि विराटनगर आयौं । विधान विपरित काम गर्नेलाइ साथ र समर्थन दिने दास हुन् । हामी दास होइनौं ।’
ओली प्रधानमन्त्री भएयता यस्तो भाषा माधवकुमार नेपालले धेरैपटक प्रयोग गर्नुभयो । प्रचण्डसँग गठवन्धन बनेपछि त नेपालमात्र होइन, प्रचण्डले पनि यो आशय फरक भाषामा प्रयोग गर्नुभयो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाउन माधव र प्रचण्डले सकेका जति सबै अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो । तर जव सक्नुभएन, त्यसपछि ओलीलाई मात्र होइन, उहाँको पक्षमा लागेका सबैमाथि निम्नस्तरको आक्षेप लगाइरहनुभएको छ ।
सत्तारुढ पार्टीकै बरिष्ठ नेताले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न शब्दकोषकै सहारा लिएपछि प्रतिपक्षी सांसदहरुबाट स्वभाविक रुपमा अनुदारता प्रदर्शन हुन्छनै । प्रतिनिधिसभाको चैत २६ को बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले ‘दास’ शब्दको प्रयोग गर्नुभएन, त्यसको ठाउँमा ओली समर्थकलाई उहाँले ‘हुक्के, चिलिमे र बैठके’ शब्दको प्रयोग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको जारी कार्यकालमा भएका विकास निर्माण र विकास निर्माणमा उहाँको सोचमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा आफू प्रधानमन्त्रीसँग वहस गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
सांसद गगनलाइ उहाँकै समकालिन नेता सांसद महेश बस्नेतले एकछिनपछि जवाफ फर्काउनुभयो । विकासमाथि स्वस्थ्य वहस हुनु सकारात्मक नै हो । तर विकासबाट अत्तालिएर त्यसलाई पूर्वाग्रहमा परिणत गरी वहस उठाउनु चाँही नकारात्मक हो । नागरिकले देखेको विकास चाँही केही होइन भन्न मिल्छ र ?
ओली सरकारका पूर्वकृषिमन्त्री घनश्याम भूषालले उहाँकै भाषाको ‘प्रतिगमन’ विरुद्ध प्रदर्शनीमार्गमा बोल्दा प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकलाई ‘साइवल स्याल’ को वाक्यांश प्रयोग गर्नुभएको थियो । उहाँले शायद् ओलीको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने युवाहरुको समुह ‘साइबर सेना’ लाइ ‘साइबर स्याल’ मा रुपान्तरण गर्नुभयो । उहाँको त्यसबेलाको आशय ओलीको पक्षमा साइबर स्यालबाहेक कोही पनि नरहेको भन्नेथियो । जवकि त्यसबेला पनि ओलीका सभामा तुलनात्मक उपस्थिति बाक्लो थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराइले दोहोर्याएर र नेता उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि टिप्पणी गर्दा उहाँका समर्थकलाई आरोपित गर्नुभएको छ । तर नेताको शक्ति अनुसार ती शब्द र बाणीले वजन पाउने हुँदा उहाँहरुका अभिव्यक्तिप्रति कोही पनि गम्भीर भएनन् । ओलीलाई हटाउने शर्तमा आफ्नो राजनीतिक जीवनसमेत दाउमा लगाउन बिद्धान बाबुराम तयार देखिनुहुन्छ, उहाँका ट्वीट हेर्दा त्यस्तो लाग्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेताहरुप्रति त्यति व्यक्तिगत टिप्पणी गरेको देखिदैंन । चैत २७ मा ‘ओली लात खाएपछि बल्ल थाहा पाए र सहयोग माग्न आएभन्दै’ प्रचण्डमाथि कटाक्ष गर्नुभयो । यो पनि प्रचण्डले रातदिन ओली हटाउन किचकिच गरेपछि प्रतिक्रियास्वरुप आएको अभिव्यक्तिमात्र हो । प्रंसग भने २०७४ को निर्वाचन परिणामपछि प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गर्नुभएका प्रचण्डले देउवासँग गरेको बिमर्शको थियो । निर्वाचनमा सहकार्य गरेर आएको परिणामपछि प्रचण्ड पूर्वप्रतिवद्धता अनुसार, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनुहुन्न्थ्यो, बाध्यभएर स्वीकार्नुभएको थियो । त्यो पनि हैसियत अनुसार, सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य लिखतपछि, जो पछि सार्वजनिक भयोनै ।
राष्ट्रिय राजनीति, गठवन्धन राजनीति, पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा उतारचढाव आउँछन् । ती उतारचढाव कसैका लागि अनुकूल र कसैका लागि प्रतिकूल हुनसक्छन् । अन्तराष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा यस्ता अनुकूलत र प्रतिकूलता देखिन्छन् । सत्तालक्षित गठवन्धन राजनीति र अझ एउटा पार्टीभित्रको सत्ता राजनीतिमा आएका छाल बढी अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । किनकी त्यहाँभित्र नेतालाइ मान्ने समुह अदलबदल भइरहन्छ ।
झट्टहेर्दा, झण्डै दुइतिहाइको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार सामान्य बहुमतमा सिमित भयो, नेकपानै बिघटन भएर पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो । अझ एमालेभित्र माधव नेपालको समुह समानान्तर गतिविधि गर्दै अघि बढीरहेकोले अव नेपालबाट कम्युनिष्ट सकिए भन्ने निश्कर्ष निस्कन सक्छ । तर एउटै विकासक्रम र घटनाले पार्टीकै अस्तित्व सकिदैंन । पार्टीको बिस्तार र क्षयीकरण उक्त पार्टीको आन्तरिक बिभाजनले मात्र गर्दैन, विपक्षीको प्रभाव र हैसियतले पनि गर्छ । फेरी अर्कोको कमजोरीको फाइदा उठाउने अवस्था अस्थायी बिस्तारको अवस्थामात्र हो । प्रदर्शन गर्ने आफ्नै क्षमता र सामथ्र्य हो ।
अहिले मुल्याकंन गर्दा, कम्युनिष्ट पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि राजनीति प्रतिकुल छ भन्ने देखिन्छ । तर फेरी यो त्यस्तो प्रतिकूलता होइन, जो चिर्न नसकियोस् । एउटा यर्थाथ हो– छिटो निर्वाचन भयो भने त्यो कांग्रेसका लागि अनुकुल हुन्छ । तर फेरी पाँच बर्र्षे आवधिक निर्वाचन भयो भने फेरी त्यस्तो अनुकूलता नहुनपनि सक्छ । शायद, त्यहीबुझेर देउवाको जोड शिघ्र निर्वाचनमा देखिन्छ ।
को सत्तारोहण हुने, कसलाई सत्ताच्यूत गर्ने, कसका बिरुद्ध कसले गठवन्धन बनाउने, कसलाइ एक्लो पार्ने यी सबै राजनीतिमा हुन्छन्नै । तर यहाँ उठान गर्न खोजिएको बिषय नेताहरुबीच एकअर्काको कटाक्षको होइन, उहाँहरुले एकअर्काबिरुद्ध प्रयोग गर्ने राजनीतिक अराजनीतिक भाषाको पनि होइन । किनकी एकछिनअघि सत्तोसराप गरेको नेतासँग एकछिन पछि सत्तागठवन्धन निर्माण गर्ने नेपाली राजनीतिक सस्कृति नै छ । यो एक प्रकारले ठिकै पनि हो, किनकी स्थायी शत्रुता र मित्रताभन्दा मुद्दा र अवस्था अनुसार परिवर्तनशिल सम्वन्ध उपयुक्त हुन्छ । नेपाली राजनीतिक दल र तीनका शिर्ष नेतृत्वमा मित्रताका लागि लचकता प्रदर्शन गर्ने चरित्र पनि छ ।
ओलीमा समर्थन गर्ने, मन पराउने नेता र कार्यकर्ता, उहाँलाई समर्थन गर्ने नेपाली नागरिक सबै दास हुन भन्ने माधव नेपालको सोच वास्तवमै निम्नस्तरको सोच हो । त्यसोभए हिजो उहाँलाई १५ बर्ष पार्टी प्रमुख बनाएका नेता कार्यकर्ता पनि उहाँका दास थिए ? वा निर्वाचनबाट पराजित हुँदा प्रधानमन्त्री बनाउने संसद र प्रधानमन्त्री मान्ने नागरिक उहाँका दास थिए ? पार्टीभित्र द्धन्द्ध हुँदा अहिले उहाँलाई साथ दिएका नेता, कार्यकर्ता र नागरिक पनि उहाँका दास हुन् ? ओलीलाई समर्थन गर्ने उहाँका दास हुन भने नेपाललाई समर्थन गर्ने उहाँका दास हुन भन्ने निश्कर्ष निस्कदैंन ? यति पनि माधव नेपाल जस्तो बरिष्ठ नेताले किन नबुझ्नु भएको होला ?
मुल मुद्दा सामान्य कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र नागरिकमाथिको गम्भीर आक्षेपको हो । प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र गगन थापाहरुलाई प्रधानमन्त्री ओली मन नपर्न सक्छ । तर त्यसको अर्थ ओलीलाई मान्ने कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र नेपाली नागरिकमाथि ‘दास, हुक्के, बैठके’ जस्ता गालीगलौजका शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? यसैलाई ठिक उल्टोपारेर माधव नेपाललाई मान्ने, प्रचण्डलाई मान्ने, बाबुरामलाई मान्ने र गगनलाई मान्ने उहाँहरुका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, समर्थक र नागरिकलाई उहाँहरुका ‘दास, हुक्के, बैठके, चम्चे’ भन्दा हुन्छ त ? हुँदैन ।
पहिला, माधव नेपालको बिराटनगर बाणीलाई हेरौं । उहाँ भन्नुहुन्छ –विधान विपरित काम गर्नेलाइ साथ र समर्थन दिने दास हुन् । हामी दास होइनौं ।’ प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले विधान विपरित काम गरेको भए त्यसलाई चूनौती दिने वैधानिक प्रक्रिया पनि त्यही विधानले व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । तर त्यो बाटो माधव समुहले अपनाएको देखिदैंन । एमाले ब्यूँतिएपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बहुमतको निर्णयबाट माओवादी केन्द्र त्याँगेर एमालेमै रहनुभएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको हो । एमाले बिस्तारका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो उपयुक्त कदम थियो । अव यहाँ कहाँ मालिक र कहाँ दासको प्रश्न आउँछ ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने सबै दास हुन भन्ने माधव नेपालको अभिव्यक्ति चाँही ओलीको रिसले गाउँस्तरसम्मका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तामाथिको अपमान हो । एकातिर, ओली समर्थकलाई उहाँ दासको संज्ञा दिनुहुन्छ, अर्कातिर हिजो उहाँसँग रहेका सांसद र नेताहरु उहाँलाइ छाडी ओलीकै साथमा पुग्नुभएको छ । उहाँ यो यर्थाथ हेर्नुहुन्न । शेरबहादुर तामाङ, लालबाबु पण्डित, कृष्णभक्त पोखरेल लगायतका सांसद र केही केन्द्रीय सदस्यले आफूलाई किन साथ दिएनन् ? किन ओली शिविरमा प्रवेश गरे भन्ने मुल्याकंन पनि गर्नुहुन्न । एमाले नाम र सूर्य चिन्हविना एमालेका नेता र कार्यकर्ता कसरी जनताका पुग्छन् ? भन्ने सोच माधव नेपालमा नहुनसक्छ तर उहासँगै रहेका सम्भावना बोकेका नेताहरुमा देखिन्छ । त्यसैले उहाँहरुमा अहिले निराशा छाएको छ ।
ओलीमा लागेका नेता र कार्यकर्ता, उहाँलाई समर्थन गर्ने नेपाली नागरिक सबै दास हुन भन्ने माधव नेपालको सोच वास्तवमै निम्नस्तरको सोच हो । त्यसोभए हिजो उहाँलाई १५ बर्ष पार्टी प्रमुख बनाएका नेता कार्यकर्ता पनि उहाँका दास थिए ? वा निर्वाचनबाट पराजित हुँदा प्रधानमन्त्री बनाउने संसद र प्रधानमन्त्री मान्ने नागरिक उहाँका दास थिए ? पार्टीभित्र द्धन्द्ध हुँदा अहिले उहाँलाई साथ दिएका नेता, कार्यकर्ता र नागरिक पनि उहाँका दास हुन् ? ओलीलाई समर्थन गर्ने उहाँका दास हुन भने नेपाललाई समर्थन गर्ने उहाँका दास हुन भन्ने निश्कर्ष निस्कदैंन ? यति पनि माधव नेपाल जस्तो बरिष्ठ नेताले किन नबुझ्नु भएको होला ? त्यसोभए किन धेरै दासहरुको निर्माणमा लाग्नुभएको त ? मालिकसँग लड्दासम्म ठिकै थियो, अव दासहरुसँग लड्ने अवस्थामा तपाई मालिक आउनु भएको हो ? देशका सबै नागरिकलाई दास करार गरेर फेरी तिनै दासको समर्थन किन खोज्नुहुन्छ ?
ओलीबिरुद्धको अभिव्यक्तिकै विगत र वर्तमान हेर्दा, प्रचण्ड पनि कम हुनुहुन्न तर पनि उहाँले माधव जस्तै ढंगमा मालिक र दासको प्रयोग बारम्बार गरेको सुनिएको छैन । ओलीलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्न भने राजनीतिक रुपमा बिरोध गर्दा हुन्छ तर ओली समर्थकलाई किन गाली गर्नुहुन्छ ? देशका युवादेखि प्रवुद्ध नागरिकसम्ममा ओलीको लोकप्रियता पहिला भन्दा बढ्दो छ । विकास निर्माणको सोच र कार्यान्वयन देखि राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्वसम्मका कारण ओली कार्यकालमा केही इतिहास निर्माण भएका छन्, जो कसैले चाहँदैमा तोडिदैंन । ओलीको वर्तमानकै निस्क्रियताले एमालेमाथि धावा बोल्न पाइन्छ भनेर बिश्लेषण गरी बिरोधमा उत्रने समुहपनि छ । जुन सरकार कर्मकाण्डी मात्र हुन्छ, जुन सरकार आवधिक निर्वाचन पर्खेर मात्र बस्छ, त्यसको विरोध हुँदैन । बिरोध त्यसको हुन्छ, जसले केही नयाँ गर्न प्रयास गर्छ, क्रमभंगताको आरम्भ गर्छ ।
दुनियाँलाई थाहा छ– झगडा सत्ताको हो, बिचारको होइन । देशनिर्माणको होइन, सत्ता नियन्त्रणको हो । प्रचण्डसँगको गठजोठ बाध्यतावश टुटेपछिको छटपटाहट आफ्नै कार्यकर्ता र नागरिकलाई गाली गरेर किन पोख्नु ? सके ओलीसँगै लड्दा भो, नसक्ने भएपनि ओलीलाइ मान्नेको अपमान नगर्नु नै माधव, प्रचण्ड, गगन, बाबुरामहरुका लागि उपयुक्त हुन्छ ।